Waxaad si toos ah uga heli kartaa liisanka tijaabada ah ee aan duuliyaha lahayn iskuul kasta oo lagu wado darawalnimada | Qalabka bilaashka ah
Waxaad si toos ah uga heli kartaa liisanka tijaabada ah ee aan duuliyaha lahayn iskuul kasta oo lagu kaxeeyo
Mid ka mid ah codsiyada waawayn ee ay diyaarad duuliye diyaaradeed samayso ayaa ah in ugu dambayntii la go’aansado nooca jidh ee caddayn kara khibradaada iyo aqoonta xeerarka kala duwan ee jira ee ku saabsan adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Sida muuqata wuxuu horeyba uheystaa soojeedin si ay iyagu u yihiin iskuulada wadista kuwa bixin kara tababarida duuliyeyaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee mustaqbalka taas oo lagu gaadho, ka dib marka la dhammeeyo koorsadan, dadka isticmaala waxay heli karaan shahaaddadooda rasmiga ah ee iyaga ugu tababbaraysa inay yihiin duuliye diyaaradeed oo ay leedahay Hay'adda Gobolka ee Badbaadada Duulista (AESA).
Waqtigan xaadirka ah, waxaa habboon in la muujiyo shaqada weyn ee ay qabanayso Aasaaska Isutagga Iskuulada Wadista Wadista ee Qaranka si markaa ugu dambeyntii ay xaaladdu u dhacdo iyada oo lala kaashanayo Ururka Iskuullada Darawalnimada ee Salamanca. Sida la aqoonsaday louis rodero, Madaxweynaha hada ee Ururka Iskuulka Wadista Wadista ee Salamanca, inta badan xarumaha Salamanca waxay si dhab ah uga fakarayaan bilaabida koorsooyinka tababarka rasmiga ah ee hawlwadeennada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, isla taas oo qofkasta oo xiiseynaya uu noqon karo duuliye diyaaradeed oo xirfad leh.
Ururka Iskuulka Darawalnimada ee Salamanca wuxuu si dhab ah u tixgelinayaa inuu awood u leeyahay inuu bixiyo koorsooyin rasmi ah si uu u noqdo duuliye diyaaradeed oo xirfad leh
Markaad wax yar ka faahfaahsan, waxaan kuu sheegayaa in maanta qorshuhu ku saabsan yahay tababbarka duuliyeyaasha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo leh awood ay ku xakameeyaan aaladaha culeyskoodu ugu badan yahay mar kasta oo ay tahay inuu ka yar yahay kan 25 kilo. Waxaan ka hadleynaa koorso socon doonta inta udhaxeysa hal ilaa labo bilood, waqtigaas oo mudada tababarka lagu soo dari doono.
Nasiib darrose, waxaan ka hadlaynaa oo keliya soo-jeedin, in kasta oo shaqsiyan ay tahay inaan qirto in wax fudud sida ay horayba u tahay mid horumarsan in la ogaado in koorsadani ay lahaan karto qiimo aad u xoog badan. waxay noqon doontaa kudhowaad 800 ilaa 900 euro. Waxaa lagu qiyaasay in duuliye kasta oo aan duuliyuhu wadin yahay inuu qaado koorso guud iyo sidoo kale kuwa kale oo gaar ah oo ku habboon adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu siin doono dhinacyo kala duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Drones » Waxaad si toos ah uga heli kartaa liisanka tijaabada ah ee aan duuliyaha lahayn iskuul kasta oo lagu kaxeeyo
Ma ogtahay in diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn loo qaabeyn karo daabacadaha 3D? Waxaan isticmaalaa Libaaxa 2 waxaanan doonayaa inaan ku fuliyo mashruucan hami qurux badan leh tan
Stratasys, Dassault Systèmes iyo Easton Lachappelle ayaa ku biiraya xooggooda dadaallo lagu horumarinayo sanaaciyo wanaagsan oo daabacan
Boqortooyada Ingiriiska waxay 25 milyan oo euro ku maalgelinaysaa xarun loogu talagalay horumarinta tikniyoolajiyadaha cusub ee qalliinka